Nvidia neValve Vanounza DLSS, tekinoroji Inoita Kuti maGamers awane mamwe mashandiro paLinux | Kubva kuLinux
Munguva yeComputex 2021, Nvidia akazivisa kubatana naValve kupa DLSS rutsigiro (Kudzidza Kwakadzika Super Sampling) varipo mumakadhi avo eRTX.
DLSS, kana Kudzidza Kwakadzika Super Sampling, iri tekinoroji inobvumidza iwe kuti uwane kuita kwakawanda usinga regedze hwakawandisa mhando yemufananidzo. Kuti uite izvi, mutambo unomhanya pane resolution yakaderera pane iyo resolution yemuno uye ipapo mufananidzo unoshandurwa kuita resolution yemuno uchishandisa algorithms.
Kuziviswa kwekutsigirwa kweValve kutsigira iyo DLSS tekinoroji inhau dzakanaka, sezvo DLSS inogona kusimudzira zvakanyanya mwero wemitengo pasina zvinokanganisa mhando yemifananidzo.
"DLSS inoshandisa advanced AI rendering kugadzira hunhu hwemufananidzo hwakaenzana nesarudzo yemuno uye dzimwe nguva kunyangwe zvirinani, nepo ichingopa kwakajairwa kupa chikamu chidiki chemapikiseli. Yepamberi nguva nzira dzekupa mhinduro dzinounza yakajeka mifananidzo yemifananidzo uye yakagadziriswa furemu-kune-furemu kugadzikana, "anodaro NVIDIA.
Iko kukanganisa kweDLSS kunogona kushamisika mumitambo inotsigira iyi tekinoroji. Mune zvimwe zviitiko, inopfuura zvakapetwa kaviri furemu mitengo pasina DLSS, kazhinji isina zvishoma zvinoonekwa. Iko kufarira kweiyi tekinoroji kuri mukudzidza kwakadzama.
Iyo yakadzidziswa neural network iri nani pakuziva zvikamu zvemufananidzo izvo zvine chekuita nekuona kwevanhu kupfuura ekare echinyakare logic algorithms uye inoshanda kunyange zvirinani kana zvasvika pakukwirazve raster subsamp mune chimwe chinhu icho ziso revanhu rinotarisira kuona.
Zvinosuruvarisa Nvidia DLSS ndeyekuchengetedza uye inoda yakakosha Hardware pamakadhi matsva eNvidia (RTX 2000 akateedzana uye pamusoro), pamusoro peizvozvo kusvika parizvino Nvidia haana kugonesa chinhu ichi mumadriver avo eLinux, ayo ariwo eimba.
Sekureva kwevamwe vaongorori, tekinoroji iyi ichave inonakidza sezvo Valve inonzi iri kufunga kugadzira chishandiso chemitambo chekubata.
Isu takapokana kuti DLSS inogona kubvumidza iyo inotevera-gen Shanduko kuti imhanye zvakanaka pamusoro pehuremu hwayo, uye zvakafanana zvichaitika nelaptop isina toni yemagetsi giraidhi, iyo ingangomhanya Linux.
PaWindows, DLSS ndeimwe yezvinhu zvakawanda zveNvidia zvinoita kuti kufambisa kuRadeon kadhi yemifananidzo kuve kwakaoma kufunga, kunyangwe kana mutengo wacho wakakodzera uye kadhi riine simba. MuLinux, iwo mabasa anodzoserwa uye zvakanyanya kunetsa kusarudza Nvidia.
AMD yakavhura maRadeon madhiraivha eLinux muna2015, ichishandisa mukana wakasununguka uye wakavhurika sosi AMDGPU kernel module iyo yaakagadzirisa zvakanyanya kunaka kwevatyairi, ichiita Radeon mifananidzo iri yepamusoro-inoshanda GPU sarudzo pasirese.
Kune vamwe, kunyangwe DLSS yaienderana nemitambo yese, "pachinzvimbo che50 chete kana 60, zvingave zvakaoma kusiya zvese izvo kuti uwedzere huwandu hwefuremu."
AMD's DLSS tekinoroji iri zvakare munzirakana. KuComputex 2021, AMD yakazivisa yayo vhezheni yeAI-yakasimbiswa sampling, iyo yainodaidza kuti FidelityFX Super Resolution (FSR). Nanhasi, kushanda kweFSR hakuzivikanwe. Sezvineiwo, FSR inogona zvakare kumhanya paNvidia GPUs, kunyangwe idzo dzisingatsigire Nvidia's DLSS.
Nhamo, FSR ichingori vimbiso panguva inosezvo isingazoburitswa kusvika Chikumi 22nd uye haina kujeka kana ichizowanikwa nekukurumidza kuLinux pazuva rekutanga.
“Isu hatinawo akawanda seasati apfuura uye mushure mekufananidzira kwemhando yemifananidzo sezvatingade. Kana FSR isingakwanise kukwikwidza neDLSS maererano nehunhu, hazvizove nebasa kana FSR ikasangana kana kutodarika mwero wayo wekuzorodza mbishi, ”anodaro AMD.
Kunyangwe Nvidia ataura kuti Vulkan rutsigiro ruchasvika mwedzi uno uye rutsigiro rweDirectX ruchasvika mukudonha, kambani haina kutaura nguva yenguva yekuti DLSS iuye kuProton. Asi zvakanaka kuti uone kuti inoenderera ichisundira Linux mutambo wekutamba kuti urarame kune iyo Windows chiitiko.